वरूण भुजलकी पत्नीले के क्षतिपूर्ति मागेकै हुन्? यस्तो छ सत्यता – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsवरूण भुजलकी पत्नीले के क्षतिपूर्ति मागेकै हुन्? यस्तो छ सत्यता
कालेबुङ: वरूण भुजेलकी पत्नी सविता भुजेलले के साँच्चै सरकारसित क्षतिपूर्ति मागेकी हुन्? यो प्रश्न अहिले चारैतिर उठिरहेको छ।
किन यो प्रश्न उठ्दैछ?
जसको जवाब एउटा यस्तो पत्रले दिन्छ जुन पत्रमा वरूण भुजेलको मृत्युको बद्ला क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। वरूण भुजेलकी पत्नी सविता भुजेलको हस्ताक्षर रहेको सो पत्र 25 अक्टोबरका दिन आईजी प्रिजन (जेल अधिकृत) पश्चिम बङ्गाललाई पठाइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ,
मेरा पति वरूण भुजेल (42), कालेबुङ वार्ड नम्बर 16 को जीजेएम काउन्सिलरको गत राती एसएसकेएम अस्पतालमा निधन भयो। 15 जुनका दिन पक्रा परेपछि उनी जलपाइगढी जेलमा थिए। उनलाई पक्राउअवधि निर्दयतापूर्वक कुटपिट गरिएको थियो। उनलाई टाउकोमा चोट लागेको थियो। 25 सितम्बरका दिन उनलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरियो अनि 22 अक्टोबरका दिन उनलाई एसएसकेएममा स्थान्तरण गरियो। यो यातनाको कारण नै हिरासतमा मृत्यु भएको स्पष्ट मामिला हो। उनलाई हेर्न जानबाट परिवारका सदस्यहरूलाई वञ्चित गरिएको थियो। हामी यो हिरासतमा भएको भयानक मामिलाको जाँचबाट पनि वञ्चित छौँ अनि हामी वैद्य क्षतिपूर्तिको माग गर्छौँ।
अहिले सामाजिक सञ्चालहरू र केही मिडिया हाउसहरूले यस पत्रलाई आधार गरेर वरूणकी पत्नीले सरकारसित क्षतिपूर्तिको माग गरेको कुरा उठान मात्र गरिरहेको छैन तर व्यापक रूपमा प्रचार पनि गरिरहेको छ।
एकातिर वरूणको मत्युपछि पहाडमा पुनः एकचोटी बङ्गाल सरकार विरूद्ध आवाज उठिरहेको अवस्थामाझ वरूणको पत्नीद्वारा हस्ताक्षरित यसकिसिमको पत्र सार्वनजनिक भएपछि के वरूणले पत्नीले साँच्चै यो पत्र लेखेकी हुन् प्रश्न उठिरहेको छ।
एकातिर आज वरूण भुजेलको अन्तिम संस्कार हुन गइरहेको छ भने अर्कोतिर वरूण पत्नी सबिता भुजेलले उक्त पत्रमा कुनै सत्यता नरहेको र यो आफू, आफ्नो पति र परिवारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र रहेको आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण दिन बाध्य बनेकी छन्।
‘मैले सही गर्दा क्षतिपूर्तिको कुरा लेखिएको थिएन’, वरूणकी पत्नीले स्पष्टिकरण दिँदै भनिन्, ‘यो पछिबाट एटिड गरेर मेरो पति अनि परिवारलाई बदनाम गर्ने कोशिश हुँदैछ।’
उनलाई एउटा पत्रमा सही गर्न लगाइएको थियो। त्यो पत्रमा आफूले न्याय पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो, त्यसैमा उनले सही गरेकी हुन्। पछिबाट उनको सहीलाई दुरुपयोग गरेर एडिट गरी क्षतिपूर्तीको मागको कुरा थपिएको सविता भुजेलले दाबी गरेकी छन्।
‘यो कुरामा सत्यता छैन। किनभने मिडिया, राजनीति सब मिलेर मेरो परिवालाई बदनाम गर्ने कोशिश हुँदैछ’, वरूणकी पत्नी सविता भुजेलले भन्दै गइन्, ‘मेरो लोग्नेलाई जुन असल ट्रिटमेन्ट चाहिएको थियो त्यो राम्रसँग दिएन अनि मैले मेरो लोग्ने गुमाउनु परेको हो। पुलिस, डाक्टर, जो पनि यस मामिलामा जिम्मेवार छन् उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा मैले सही गरेकी हुँ।’
वरूणकी पत्नीलाई लाग्छ, यदि उनले क्षतिपूर्तिको कुरा गरिकी भए त्यो पत्रको टुप्पोमा नै उल्लेख हुन्थ्यो। तर पत्रको फेदमा क्षतिपूर्तिको कुरा एडिट गरेर हालिएको हो। उनले यी जम्मै थोक आफ्नो पति र परिवारलाई बद्नाम गर्ने कोशिशबाहेक अरू केही नरहेको बताइन्।